Sida loogu qariyo xiriirada WhatsApp tabahaan | Androidsis
Ignacio Sala | 27/08/2021 22:00 | Khiyaamada Android, Whatsapp
Sababaha noo horseedi kara ku qari xiriirada WhatsApp Waxay ka mid yihiin kuwa ugu kala duwan oo ku tiirsan, inta badan kiisaska, bay'adeena. Ku-dhuumashada xiriirada WhatsApp-ka waa inaysan had iyo jeer la xiriirin sameynta khaladka, maadaama mararka qaarkood ujeedkeenna laga yaabo inay ujeeddadeedu tahay inaan ku ilaalino asturnaantayada deegaan aan habboonayn, oo qof si la yaab leh u siin ...
Nasiib darro, dhammaan xulashooyinka ay WhatsApp noo diyaariso, kama helno suurtogalnimada inaan qarinno xiriirada. Tan waxaa u sabab ah hawlgalka WhatsApp, iyo tan wuxuu ku shaqeeyaa lambarada telefoonka oo aan ahayn naanaysyo ama email ahaan. Nasiib wanaag, dhibaatadan, waxaa jira dhowr xal oo aan hoos ku tusno.
1 Qari magacyada dadka lala xiriirayo
2 Magacaabi xiriirada
3 Diiwaangelinta wada sheekaysiga si joogto ah
4 Ka ilaali gelitaanka WhatsApp
5 Wadahadal ku meel gaar ah
6 Tirtir sheekaysiga
7 Ku ilaali wada sheekaysiga sirta
8 Iska ilaali in lagu basaaso WhatsApp
Qari magacyada dadka lala xiriirayo
Ka hor intaanay soo bixin telefoonnada gacanta, waxa ugu badan waxay ahayd in la sameeyo layliyo xusuusta si loo kaydiyo lambarada taleefanka ee aan u baahannahay inaan ogaano madaxeenna. Si kastaba ha noqotee, markii ay soo baxeen taleefannada gacanta, tirada taleefannada ayaa kordhay waxaana sabab u ah dabeecaddayada, waxaan nafteena ka dhignay kuwo raaxo leh waxaanan dooranay inaan isticmaalno aaladdan si aad u kaydiso lambarada telefoonka.
Waxaad samayn kartaa baaritaanka. Ma xasuusataa lambarka taleefanka mid ka mid ah adeeradaa? Xaqiiqdii maya. Waxa aynu ka leexannay mawduuca. Xalka looga hortagayo magacyada xiriirada aan wada sheekaysiga kula yeelanno WhatsApp in lagu muujiyo arjiga ayaa la marayaa qariyaan xiriirada qalabka.
Dhalad ahaan, Google ma noo ogolaato inaan ku qarino xiriirada taleefankeena casriga ah, sidaa darteed waxaan ku qasbannahay inaan ku dhaqaaqno codsiyada dhinac saddexaad sida HiCont Qari xiriiradaada. HiCont Qari xiriiradaada, waa codsi aan si buuxda u soo dejisan karno oo lacag la'aan ah taas oo noo oggolaaneysa inaan qarinno lambarada taleefannada ee aanan doonayn in lagu muujiyo aaladdayada, iyo, sidaa darteed, dalabka WhatsApp.
HiCont Qari xiriiradaada
Developer: Shirkadda AM
Dhammaan xiriirada aan ku qarinno arjiga, iyaga uun baa laga heli karaa iyada, oo hore u galaysay habkii xannibaadda ee aan hore u aasaasnay. WhatsApp -ka lambarka taleefanka ayaa lagu tusi doonaa oo haddii aan tixgelinno in qofna uusan xafidin lambarada taleefannada xiriirkooda, tani waa ikhtiyaar xiiso leh in la tixgeliyo si loogu qariyo xiriirada WhatsApp.
Ikhtiyaar kale oo xiiso leh oo ay tahay inaan tixgelinno haddii aan rabno inaan ku qarinno xiriirada WhatsApp waa bedelida magaca xiriirkeena. Adigoo beddelaya magaca qofka aan la xiriirno, qofka ah xanta WhatsApp -ka, ma awoodi doontid inaad ku aqoonsato isha qaawan cida aan la hadlayno ilaa aad taqaano lambarka taleefanka (wax sidaan kor ku soo sheegay aan macquul ahayn).
Markaan beddelno magaca xiriirka, WhatsApp wuxuu si otomaatig ah u aqoonsan doonaa magaca cusub ee la xiriira lambarka taleefanka kaas oo aan ku abuurnay wada hadal oo aan cusboonaysiin doonno magaca uu muujinayo.
para dib u magacow xiriir, waa inaan helnaa buugga taleefanka ee aaladda, tafatirnaa xogta xiriirka oo aan ku beddelnaa magaca hadda kan cusub oo aan ku garan doonno qofka aan dooneyno inaan ka qarinno wada sheekaysiga.
Beeraha intiisa kale ee xiriirku na siinayo inaan galno macluumaad dheeri ah, tusaale ahaan magaca shirkadda, qor magaca dhabta ah, si aan u awoodno inaan ku aqoonsanno raadinta magaca iyada oo loo marayo buugga taleefanka haddii aanaan xasuusan cida tirada leh.
Diiwaangelinta wada sheekaysiga si joogto ah
Mid ka mid ah ikhtiyaarrada ay WhatsApp noo diyaariso oo noo oggolaanaysa inaan qarinno wada sheekaysigayada oo aan ka dhigno kuwo la arki karo isla markaan furi karno arjiga, waa sheekooyinka archive. Ficilkan waxaa loogu talagalay in sheekaysiga aan mar dambe adeegsaneyno ay indhahayaga ka baxaan oo aysan na dhibsan.
Marka sheekooyinka la keydiyo, waxay ka baxda shaashadda ugu weyn ee WhatsApp, laakiin wali waa laga heli karaa iyada oo loo marayo menu Chats Archived, ikhtiyaarka raacaya wada sheekaysiga ugu da'da weyn ee aan wali ku hayno shaashadda ugu weyn ee arjiga.
Haddii aan dooneyno in wada sheekaysiga aan inta badan ku dhex marno arjiga, aan lagu muujin arjiga ugu weyn, waa inaan kaydinnaa markaan wadahadalka dhammeyno. Maskaxda ku hay in markaan ka helno fariin WhatsApp cusub sheekada aan kaydinay, waa ayaa mar kale lagu soo bandhigi doonaa shaashadda weyn.
Si loo keydiyo wada sheekaysiga WhatsApp, sida ugu dhaqsaha badan ee loo sameeyo waa in la riixo oo la qabto sheekaysiga aan rabno inaan dhaqaajino oo guji sumadda ay matalayso fallaadhaha hoose ee sanduuq ku yaal xagga sare ee arjiga.
Ka ilaali gelitaanka WhatsApp
Haddii aynaan doonayn inaan u adeegsanno codsiyada si aan u qarinno xiriirada, dib u magacawno ama u kaydinno sheekaysiga waqti -gaaban, xalka ugu dhaqsaha badan, ugu fudud uguna nabdoon ayaa ah in la xannibo gelitaanka arjiga iyada oo loo marayo koodh lambar, faro, hannaan ...
para ilaali gelitaanka WhatsApp Iyada oo loo marayo faraha, hannaan, lambar lambar ama aqoonsiga wejiga, waa inaan fulinaa tallaabooyinka aan hoos ku faahfaahinayo:
Marka aan furno arjiga, guji saddex qodob oo taagan oo ku taal geeska kore ee midig ee arjiga.
Marka xigta, guji Koontada. Gudaha xisaabta at Privacy.
Marka xigta, waxaan u rognaa dhammaadka menu oo guji Quful leh farta / wajiga / garashada qaabka (qoraalka wuu ku kala duwan yahay hadba awooda qalabka).
Finalmente waxaan shidnay badhanka Ku fur fahanka / wejiga / aqoonsiga qaabka
Waa inaan dooranaa caqli badan habka aan rabno inaan isticmaalno, maadaama mar kasta oo arjiga uu aado asalka, in kasta oo ay noqon doonto ilbidhiqsi, waa inaan mar labaad ka jooji gelitaanka codsiga, sidaa darteed sida ugu raaxada badan ee habka loo doortay in lagu furo gelitaanka, ayaa ka sii fiican.
Gaar ahaan, inta badan kuma taliyo adeegsiga lambar lambar, maadaama dadka deegaankeenna ay ogaan karaan haddii ay na fiiriyaan mar kasta oo aan galno WhatsApp oo aan galno koodhka. Haddii terminaalkayagu duugoobo oo uusan bixin nidaamka ilaalinta biometric, waxa ugu fiican ayaa ah isticmaal koodh ka duwan kan aan u isticmaalno si aan u xannibno gelitaanka terminal -ka.
Wadahadal ku meel gaar ah
Hadaadan caqli galin taariikhda wada sheekaysiga hayso oo aad la leedahay qof, waa inaad tixgelisaa abuurista sheekado ku meel gaar ah. Wada sheekaysiga ku meelgaarka ah ee WhatsApp noo oggolaanayso inaan abuurno si otomaatig ah u tirtir dhammaan waxyaabaha la wadaago ka dib 7 maalmood ayaa dhammaaday.
Waa lagama maarmaan taas labada qofba waxay dhaqaajiyaan ikhtiyaarkansida haddii kale ma shaqayn doonto. Si aad u dhaqaajiso sheekooyinka ku -meel -gaarka ah, waa inaan helnaa ikhtiyaarrada xiriirkeena oo guji farriimaha ku -meelgaarka ah. Marka ikhtiyaarkan la awoodo, saacad ayaa lagu soo bandhigi doonaa mid kasta oo ka mid ah wada sheekaysiga halkaas oo ikhtiyaarkan la awooday.
Sida loo abuuro istiikarada WhatsApp talaabooyin kooban
Ikhtiyaarka ugu xagjirka badan ee dadka heli kara taleefankeena casriga ah si ay u ogaadaan qofka aan la sheekeysano ayaa soo mara tirtir sheekaysiga kadib markay dhammaadaan, si aan wax raad ah looga reebin arjiga. Dhibaatadu waxay tahay in ay tirtiri doonto dhammaan waxyaabihii la wadaagay.
Haddii aanaan doonayn in la tirtiro, waxaan dooran karnaa inaan kaydinno farriimaha, in kastoo ma aha ikhtiyaar aad u ammaan badan, mar haddii uu qofku aqoon leeyahay, si fudud ayaad ku heli kartaa.
Parar tirtir sheekaysiga WhatsApp, waa inaan riixnaa oo ku haynaa sheekaysiga aan rabno inaan tirtirno ka dibna riix sumadda qashinka qashinka ee lagu muujiyey xagga sare ee arjiga.
Sida loo beddelo luqadda keyboard-ka ee WhatsApp
Ku ilaali wada sheekaysiga sirta
Waxaan u keydiyay habkan markii ugu dambeysay maadaama aysan ahayn hab aan si indho la’aan ah ugu aamini karno isbeddel kasta oo ku yimaada WhatsApp wuu burburin karaa. Waad ku mahadsan tahay dalabka Locker Chat, waxaan xannibi karnaa gelitaanka sheekaysiga na xiiseeya annaga oo adeegsaneyna qaab, lambar lambar, faro ...
Locker Chat ayaa kuu diyaar ah ku soo dejiso bilaash, waxaa ku jira xayeysiisyo laakiin ma jiraan wax-iibsi-ku-jira. Codsigu wuxuu noo oggolaanayaa inaan si sir ah u ilaalino wada sheekaysiga shaqsiyeed iyo wada sheekaysiga kooxda. Haddii cusboonaysiinta cusub ee WhatsApp, ay joojiso shaqadeeda, waa inaan sugno soo -saaraha si uu u cusboonaysiiyo si ay u sii shaqeeyaan.
Chat Locker ee WhatsApp
Developer: XUQUUQDA - QAADASHADA, FARXADKA & JOOJI CHAT
Iska ilaali in lagu basaaso WhatsApp
Haddii aan rabno gabi ahaanba qofna ma heli karo wada sheekaysigayaga WhatsApp, ikhtiyaarka ugu fiican ee dalabku na siiyo waa ilaali marinka iyada oo loo marayo koodh, qaab, faraha ama aqoonsiga wejiga.
Sidaan kor ku soo sheegay, haddii aan doorano lambar lambar, tani waa inay noqotaa ka duwan kan aan u isticmaalno furitaanka terminal -ka, tan iyo haddii kale, bay'adeena waxay ku baran kartaa iyada oo si isdaba joog ah u aragta annaga oo galnay terminaalka si aan u helno.
Ikhtiyaar kale oo xiiso leh ayaa ah ku qari astaanta dalabka faylal badan, oo aan uga tagin shaashadda guriga iyadoo ay dunida si buuxda u aragto. Maskaxda ku hay in WhatsApp ay ku casuumayaan xiisaha iyo haddii ay ku jirto qof kasta, waxay u badan tahay inaad ku dambayn doonto gujinta.
Waxaan u maleynayaa inay tahay iyada oo aan la dhihin waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno, kaliya ma ahan inaan ilaalino gelitaanka dhinac saddexaad ee WhatsApp laakiin sidoo kale inaan ilaalino asturnaantooda ilaali gelitaanka aaladda iyadoo la adeegsanayo mid ka mid ah hababka kala duwan ee ay bixiso terminal.
Haddii aaladdaadu aysan bixin mid ka mid ah hababka ilaalinta ugu casrisan, sida faraha ama aqoonsiga wejiga, waxaan haysannaa ikhtiyaar ah inaan hor istaagno gelitaanka aaladda iyada oo loo marayo koodh lambar, ikhtiyaar laga helay dhammaan boosteejooyinka Android, si kasta oo ay tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Whatsapp » Sida loogu qariyo xiriirada WhatsApp tabahaan
Huawei's EMUI 12 hadda waa rasmi wuxuuna la yimid dhowr isbeddel iyo horumarin